Ny ankabeazan’ ireo mpampianatra 400 dia efa tafiditra mpikambana Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Taorian’i Moramanga dia nitodi-doha namonjy ny faritra Atsimo Andrefan’i Madagasikara ny ekipan’ny Tahirim-pirenena sy ny foibe fanabeazana katolika. Tsapa tamin'izany fa ny ankabeazan’ireo mpampianatra miisa 400 ao anatin’ny diosezin’i Toliary dia efa tafiditra mpikambana Cnaps. Na eo aza izany vaovao tsara izany aza dia tsy diso anjara tamin’ny filankevitry ny talen-tsekoly izay karakarain-dry Mompera Ranaivoson Jules ny Didec Toliary. Ilain'ny mpitantana sekoly tokoa ny mahazo fiofanana.
Diosezy 15 no efa nahazo ny fiofanana avy amin'ny Cnaps. Toy ny tany amin’ny diosezy hafa efa nanaovan'ny Cnaps fiofananana dia nanana roa andro ny ekipan’i Rasoanaivo Didier, talen’ny fenitra sy ny fikarohana eo anivon’ny Cnaps nanamafy tamin’ireo talen-tsekoly ny maha zava-dehibe ny fananana fiahiana ara-tsosialy. Isan’ny vokatra andrasana ny fampahafantarana an'ireo mpitantana sekoly ny fanajana ny zon’ny mpampianatra sy ny fampidirana ireo mpandraharaha ho mpikambana ao amin’ny Cnaps. Fanarahan-dalàna izany. Hahazoana tombontsoka sy vokatra tsara ihany koa. Manatsara ny kalitaon’ny famokarana eo anivon’ny toeram-piasana tokoa ny misy mpisa milamin-tsaina. Tanjona ny hahafahan’ny tsirairay misitraka ny zony amin’ny sehatra rehetra.
Randrianirina Gislain tompon’andraikitry ny Didec Toliary dia nanamafy fa ilaina ny fahafantarana sy ny fampiharana ny lalàna velona ho an’ny olona miandraikitra ny fanabeazana. Koa zava-dehibe aminy ny fiofanana nataon’ny CNaPS amin’ny fahafantarana hoe inona marina ny « maha-izy azy ny sekoly katolika manoloana ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy ».
Notsahivin’Andriamatoa Randrianarijaona Charles Emilson lehiben’ny sampan-draharaha SASS eo anivon’ny tahirim-pirenena nandritra ny fiofanana fa araka ny andininy voalohany laharana faha 45–169 amin’ny « Code de Prévoyance Sociale » (na ny Lalànan’ny Fiahiana ara-tsosialy), ny orinasa mampiasa olona fehezin’ny Satan’ny Asa , sy ny Lalàna an-dranomasina dia tsy maintsy mampiditra mpikambana Cnaps ny mpiasa rehetra. Ary tsy mitombina ny filazana fa ny Cnaps dia manaisotra na mandroaka ny mpikambana ao aminy ; mampitandrina ireo rehetra mamafy lainga ny tenany. Na misy aza orinasa na sekoly tsy mahaloa latsakemboka dia tsy mandroaka velively ny mpikambana ao aminy ny Cnaps fa manao fifanatonana ary miezaka hatrany mitady vahaolana araka ny dimngana rehetra.
Navitrika ireo mpandray anjara tamin’ny fiofanana ary nambaran’i Ralay Emmanuel talen’ny sekoly Mahavatsy Toliary fa amin’ny maha-mpitantana sekoly azy dia manana adidy amin’ny fanatsarana ny fiainan’ireo mpiara-miasa aminy ny tenany. Aminy ny fahafantarana ny lalàna ohatr’izao dia hahafahan’ny mpiasa mahazo ny zony ara-tsosialy, ary rehefa misitraka ny zony ny mpiasa dia mazoto miasa araka ny tokony ho izy.
Nohamafisin’i Mompera Jean Chris talen’ny sekoly katolika SEMA any Toliary fa ny fiaraha-monina dia mila lalàna raha tsy izany dia samy manao izay tiany hatao ny rehetra. Koa ny fampianarana nomen’ireo mpiasan’ny Cnaps azy ireo dia ilaina amin’ny famerenana ny zo maha-olona. « Ny kibo noana marenina », ka ny mpampianatra dia mila manana fahavitriana amin’ny asa ataony. Raha sanatria ka noana ny mpampianatra dia hikorontana ny fampianarana izay ataony. Fa rehefa soa ny mpampianatra dia ho soa ihany koa ny fanabeazana omeny.
CNaPS - DIDEC Antsiranana : Des membres du « VRM » sensibilisés sur le Code de la Protection sociale - il y a 2 jours
Fifidianana : Mandavan-taona no ilana ny fanabeazana - il y a 13 jours